के मेरो इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू अन्य देशहरूमा काम गर्दछ? | यात्रा समाचार
यस पूर्ण रूपमा जडान भएको संसारमा हाम्रो इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू बिना यात्रा गर्न वास्तवमै गाह्रो छ: मोबाइल फोन, ट्याबलेट, ल्यापटप, क्यामेरा, जीपीएस, आदि। सम्भवतः, यी उपकरणहरू मध्ये दुई वा तीन, यदि बढि होइन भने, हामी हाम्रो यात्रामा साथ गर्नेछौं।
र त्यहाँ प्रश्नहरू सुरु हुन्छन्। यस उपकरणको लागि त्यहाँ प्लग छ? मेरो गन्तव्यमा कुन भोल्टेज प्रयोग हुनेछ? यो काम गर्दछ वा यो प्लग इन भएको बेलामा टुक्रिनेछ? छुट्टीको योजना बनाउँदा धेरै सामान्य प्रश्नहरू जुन हामी आजको पोष्टमा उत्तर दिन प्रयास गर्ने छौं।
छवि | आदर्श
प्रत्येक देशमा इलेक्ट्रोनिक स्थापनाहरू फरक-फरक हुन्छन्। सुरक्षित रूपमा यात्रा गर्न, हामीले एन्डाप्टर र प्लगहरूको बारेमा सबै विवरणहरू जानेर, इलेक्ट्रोनिक सर्तहरूमा हामी कुन देश जाँदैछौं भन्ने जान्नुपर्दछ। यस अर्थमा, हाम्रो गन्तव्यमा उपयुक्त व्यक्तिहरू फेला पार्न सकेन भने सम्भव हुनु अघि हाम्रो जन्म भएको देशमा एडेप्टरहरू लिनको लागि सुविधाजनक छ। यो सत्य हो कि धेरै आवासहरू तयार छन् र उनीहरूका ग्राहकहरूलाई एडेप्टरहरू प्रस्ताव गर्दछ तर यदि होईन भने सावधान रहनु राम्रो हो।
यी एडेप्टरहरू इलेक्ट्रिकल स्टोर वा सुपरमार्केटमा सजीलो हुन सक्छन्। त्यहाँ हामी ग्रह मा यात्रा को आधार मा बिभिन्न प्रकार छन्, तर त्यहाँ सार्वभौमिक एडेप्टरहरू कुनै पनि प्रकारको प्लगको लागि तयार छन्। कि, थप रूपमा, तपाईं एक पीसी को उपयोग बिना नै चार्ज गर्नको लागि USB लाई सिधा इलेक्ट्रिकल आउटलेटमा जडान गर्न अनुमति दिनुहुन्छ।
1 एडेप्टरमा के के हुनुपर्दछ?
2 ईयुमा, प्रकारहरू सी र एफ प्रबल हुन्छन्
3 अन्य फ्रिक्वेन्सीहरू र भोल्टेजहरू
एडेप्टरमा के के हुनुपर्दछ?
इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटहरूको लागि पर्याप्त वाट क्षमता
कम्तिमा तीन फरक एडेप्टर प्रकारहरू
अर्को मुद्दा भोल्टेज हो, जुन दुई सेटमा समूहीकृत गर्न सकिन्छ: १००-१२100v को र अर्को २०२०-२127v को। यो असुविधा एक भोल्टेज कन्भर्टरको साथ समाधान गर्न सकिन्छ जुन इलेक्ट्रिकल स्टोर र ठूला व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा फेला पार्न सकिन्छ।
फ्रिक्वेन्सीको बारेमा, भोल्टेजसँगै, प्राय: इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू दुबै h० हर्ट्ज र h० हर्ट्जको लागि तयार छन्।
ईयुमा, प्रकारहरू सी र एफ प्रबल हुन्छन्
युरोपमा, प्रायः देशहरूले दुई गोलाकार पिनहरूको साथमा टाइप C प्लग प्रयोग गर्दछन्। सी वा यससँग उपयुक्त, स्पेनमा एफको साथ, जर्मन मूलको ट्याबको रूपमा सुरक्षात्मक पृथ्वी सम्पर्कहरूको साथ।
प्रकार C र F का साथ उपयुक्त अन्य प्लग ई बेल्जियम र फ्रान्समा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको ई हो। टाइप जे, तीन गोलाकार त्रिकोण पिनको साथ स्विट्जरल्याण्डमा प्रयोग हुन्छ र प्रकार सी र एफको इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू स्वीकार गर्दछ। डेनमार्कमा प्रयोग गरिएको K प्रकार स्पेनमा प्रयोग गरिएकोसँग मिल्दो छ। इटालीमा F, L र C प्रकारहरू छन्।
अन्य फ्रिक्वेन्सीहरू र भोल्टेजहरू
युरोप भित्र आयरल्यान्ड र ग्रेट ब्रिटेन जस्ता अपवाद छन् कि तीन फ्लैट पिन संग प्रकार जी प्रयोग। दोस्रो विश्वयुद्ध पछि ब्रिटिश टाइप जी प्रत्यारोपित आफ्नो विदेशी इलाकामा पुग्न सकेन। अधिक अझै पनि अघिल्लो मानक, टाइप एम, तीन गोलाकार पिन संग एक त्रिकोण मा व्यवस्था गरीएको छ। वा प्रकार डी, भारतमा प्रयोग। अन्य कालोनिजहरू जस्तै न्यूजील्यान्ड वा अष्ट्रेलियामा टाइप आई प्लगहरू हुन्छन्, अर्जेन्टिनामा प्रयोग हुने समान।
२० औं शताब्दीको s० को अन्त्यमा त्यहाँ टाइप एन, विश्वव्यापी प्लग बिरुवा जम्मा गर्न कोशिस गरियो, तर यो ब्राजील र दक्षिण अफ्रिकामा मात्र अपनाइएको थियो। उत्तर अमेरिका (मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका), मध्य अमेरिका (कोस्टा रिका) , पनामा) क्यारिबियन (डोमिनिकन रिपब्लिक, क्युबा) दक्षिण अमेरिका (कोलम्बिया, भेनेजुएला, बोलिभिया) र जापानले १२60,१२०, ११०, ११०, १०० वाटको भिन्न भोल्टेज र her० हर्ट्जको आवृत्ति प्रयोग गर्दछ। त्यहाँ, प्लग A को प्रकार, अमेरिकी मूलको, दुई सपाट पिनहरू छन्, वा बी, जुन सुरक्षित छ किनकि यसले पृथ्वी जडानको लागि एक तिहाई समावेश गर्दछ। तिनीहरू एक अर्कासँग उपयुक्त छन्। मानकीकरण अझै लामो टाढा छ, तर क्षितिज USB जडानहरूमा सेट गरियो।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » के मेरो इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू अन्य देशहरूमा काम गर्दछ?